Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety WTTC Summit mialoha ny fanokafana any Cancun dia tsy vonona hametraka fanontaniana
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety WTTC Summit mialoha ny fanokafana any Cancun dia tsy vonona hametraka fanontaniana
Aprily 25, 2021
sary whatsapp 2021 04 25 ao amin'ny 11 56 56 1
Ny tontolon'ny fitsangatsanganana sy fizahantany dia mitady any Cancun hahazoana valiny. Amin'ny Alatsinainy sy Talata dia hanao ny fihaonana an-tampony voalohany ny WTTC. Misy fanantenana lehibe. Azo atolotra ve izy ireo?
Cancun dia ao amin'ny State of Quintana Roo any Mexico.
Ao amin'ny Moon Palace Resort any Cancun, izao tontolo izao ny fizahan-tany dia miara-mivory hanatrika ny Filankevitry ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany Fihaonana an-tampony.
Betsaka ny fanontaniana ary tsy misy valiny amin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany.
Ny talen'ny WTTC Gloria Guevara sy ny governoran'i Quintana Roo, Carlo Joaquin dia nangataka tamin'ny haino aman-jery mba hanatrika valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny efitrano A tao amin'ny foiben'ny fivorian'ny Moon Palace ny Alahady tamin'ny 11.00 maraina. Tonga ara-potoana ny mpanao gazety ary marobe no miandry ny valiny momba ny fomba mety hahatongavan'ny vovonana WTTC ho mpanafika amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatry ny fizahantany manerantany. Natomboka tamin'ny iray ora teo ho eo ny fihaonambe, ary niandry ny hametraka fanontaniana ny mpanao gazety.
Ahoana no ahafahan'ity fihaonana an-tampony ity ho fampisehoana mahaliana fotsiny avy amin'ny mpanohana toa ny Global Rescue na ny fizahantany Saudi Arabia? Vintana io ary tokony antenaina ho an'ny mpanao politika hifanakalo vahaolana omen'ny sehatra tsy miankina. WTTC dia nilaza fa hisolo tena an'ity sehatra tsy miankina ity.
Tamin'ny hetsika fanaovan-gazety androany dia nambara fa nidina 50% eran'izao tontolo izao ny fizahantany. Misaotra ny WTTC ny governora ary ny WTTC kosa nisaotra ny governora ..
Fanontaniana hafa no tsy voavaly. Nahazo boky miloko ao amin'ny Cancun ny mpanao gazety fa tsy nomena fotoana hametrahana fanontaniana.
Izay rehetra niditra tao amin'ny efitrano dia tsy maintsy nanamarina ny mari-pana. 6 metatra ny elanelan'ny seza, fa rehefa nandao ny hetsika i Gloria sy ny Governora dia tsy olana intsony ny fanalavirana ny fiaraha-monina. Tsy nisy filaminana nitazomana ny mpanao gazety mahery setra ary nanome toerana ny CEO WTTC sy ny Governora hivoaka ny efitrano.
Ny fientanentanana tamin'ny hetsika ara-batana iray momba ny famerenana indray ny indostrian'ny fizahantany dia lehibe loatra. Ny WTTC dia tsy maintsy ekena hisintona an'io tampon tampon'ny fihaonambe rehetra io.
Ny roa andro manaraka dia haseho, ary eTurboNews Hampiampita mivantana ny hetsika amin'ny tranokala eTN rehetra ny alatsinainy sy talata.